AMAVA ENGQONDI 2 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
AMAVA ENGQONDI 2AMAVA ENGQ ... 2
21Ke kaloku ndagqiba kwelithi: “Makhe ndilinge iziyolo, ndizonwabise, ndive ukuba kunjani na!” Kodwa ke ndafumanisa ukuba naloo nto ngamampunge. 2Ukuhleka ndathi: “Bubuyatha;” iziyolo zona: “Ngaba zindizisela ntoni?” 3Ndacamanga entliziyweni yam ukuba mandithi lo gama ndifuna ubulumko khe ndizilahlele kwiwayini, ndiziphathe okwesityhakala, ndide ndibone ukuba yeyiphi into ebalungeleyo oonyana babantu ukuba bayenze apha emhlabeni ngemihla embalwa yobomi babo.
4Ndenza imisebenzi emikhulu: ndazakhela izindlu, ndatyala izidiliya, 5ndalima izitiya, ndenza nemiyezo, kuyo ndatyala zonke iintlobo-ntlobo zeziqhamo. 6Ndemba ndenza amadama ukuze ndinkcenkceshele loo mithi isahlumayo. 7Ndandizithengela amakhoboka angamadoda nabhinqileyo, kwada kwakho namakhoboka azalelwa emzini wam. Ndandinemihlambi emininzi yeenkomo nempahla emfutshane1 Kum 4:23 ngaphezu kweyabo bonke abakhe bahlala ngaphambi kwam eJerusalem. 8Ndaqokelela imfumba yesiliva negolide,1 Kum 10:10,14-22 ndiyithatha kwindyebo yookumkani abaphantsi kwam, namazwe endiwalawulayo. Ndandineekwayala zokundonwabisa – amadoda nabantu ababhinqileyo. Kananjalo ndandinabafazi abaninzi ngokomnqweno wentliziyo yam.1 Kum 10:23-27; 2 Gan 9:22-27 9Ewe, ndandisisikhulu,1 Gan 29:25 ndimkhulu kunabo bonke abakhe bema eJerusalem ngaphambi kwam. Ngalo lonke eli xesha bendincedwa bubulumko bam.
10Yonke into endandiyinqwenela ndandiyifumana,
kungekho nasiyolo sakha sandiphosa.
Ndandineqhayiya, ndizidla ngayo yonke imizabalazo yam;
lowo yaba ngumvuzo wam ngoko kubulaleka.
11Ndathi ke ndakuwuphonononga wonke umsebenzi wezandla zam nokubulaleka endibulaleke ngako,
ndafumanisa ukuba yonke loo nto ngamampunge nje,
yimfeketho enjengokusukelana nomoya.
Ewe, akukho nzuzo apha phantsi kwelanga.
Ubulumko nobutyhakala ngamampunge
12Ndaza ke ndaphicotha umahluko phakathi kobulumko kunye nobutyhakala nobudenge. Kakade yintoni anokuyenza ongena ezihlangwini zokumkani ebeyingasele yenziwa ngaphambili?
13Ndabona ukuba ubulumko buyakhetheka kunobutyhakala,
kwanjengokuba ukukhanya kungcono kunobumnyama.
14Umntu osisilumko uyabona apho aya khona,
kanti ke sona isityhakala sifathula emnyameni.
Kambe ke ndafumanisa ukuba bebonke isiphelo sinye.
15Ndagqiba kwelithi: “Nam ngokwam ndiya kufa kwanjengesityhakala, ibe yintoni ke endiyizuzileyo ngobulumko?” Ndaza ndagqiba kwelithi: “Nale ke into ikwangamampunge. 16Isilumko siyalityalwa, kanti nesityhakala asikhunjulwa. Ngemihla ezayo bobabini bayalityalwa, bangabi sakhunjulwa. Kukugqwesa ngantoni ke ukufa kwesilumko ukufa kwesityhakala?”
17Ngoko ke ndatsho ndabucaphukela ubomi, kuba yonke into eyenziwa apha phantsi kwelanga yasuka yandiphathela inkxwaleko. Ewe, zonke izinto ngamampunge, nqwa nokusukelana nomoya. 18Ke kaloku ndasuka ndakucaphukela konke ukubulaleka kwam apha phantsi kwelanga, kuba ndisazi ukuba ndihlalelwe kukuzishiya kulowo undilandelayo zonke izinto endizenzileyo. 19Kwazi bani ke ukuba woba sisilumko okanye isityhakala? Ukanti ke noba kunjalo konke ukubulaleka nobuchule bam apha phantsi kwelanga buya kuba semandleni akhe. Hayi suka, ngamampunge lawo! 20Ngoko ke ndatsho ndazisola ngokubulaleka kwam konke apha phantsi kwelanga. 21Kaloku umntu ebesenokuwenza umsebenzi wakhe ngobulumko, ingqiqo, nobuchule, kanti yonke loo nto abulaleke ngayo uza kuyishiya emntwini ongayisebenzelanga mpela-mpela! Ngenene nale into ngamampunge; imbi kunene! 22Kodwa-kodwa uzuza ntoni umntu ngemizabalazo nokubulaleka kwakhe apha phantsi kwelanga? 23Yonke imihla yakhe yinkxwaleko, nokuzabalaza kwakhe ziinzingo.Yobi 5:7; 14:1 Nasebusuku uyaphuthelwa angaphumli. Ewe, yonke loo nto nayo ingamampunge.
24Ayikho enye into angayenzayo umntu ngaphandle kokuba atye asele,Mava 3:13; 5:18; 9:7; Isaya 56:12; Luka 12:19; 1 Kor 15:32 ahlale anelisekile kukubulaleka kwakhe. Phofu ke naleyo ndafumanisa ukuba iphuma kwasesandleni sikaThixo, 25kuba kaloku ngaphandle kwakhe akukho mntu ungatyayo okanye onwabe. 26Kaloku uThixo umnika ubulumko, ingqiqo,Yobi 32:8; Zaf 2:6 nokonwaba, loo mntu umkholisayo; kambe ke bona abagwenxa abanike uxanduva lokusebenza nzima, beqweba beqokelela ubutyebi, ukuze ke babunikezele kwabo bakholisa uThixo. Ngenene nale into ngamampunge, ifana nokusukelana nomoya.